caqiidada » noocyada » maadooyinka » boga : 1
tirada qaybaha: 206
PDF 26 / 4 / 1432 , 1/4/2011
curiye : sh.c.caziiz binu c.laahi bin baaz tumjumid : cabdi raxmaan maxamed qeyliye
curiye : Sh. maxamed saalax Al-munajid
Usuulu Saddexda tiirka 5aad in Lagu xajjo baytka ilaahay kii awooda
Usuulu Saddexda tiirka 4aad inla soomo Ramaadan
Usuulu Saddexda tiirka koobaad labad shahaado
shariicada iyo diinta oo sifiican loo kamilay iyo in bidca lalayimaado khatarnimadeeda
qaacidooyin afar ah
curiye : Sh. Maxamed Bin Cabdulwahaab
waa kitaab ka hadlaya afar qaacido oo ku saabsan dhanka tawxiidka, sida shirkiga iyo dhibaatooyinkiisa, shafaacada, iwm.
Qofkii ilaahay cid kale garab dhiga ama cibaadada la wadaajiya, janada ayaa laga xaaraam yeelay
Waa duruus taxane ah ku baxaysa qaabka qoraanka, taasi oo ka hadlaysa, arimo badan oo la iska reebay samayntooda, iyo ku dhaqankoodaba.
Ma banaana in qabriga la dhiso ama wax laga dul dhiso
Waxaa alla inaga reebay in aan isku eekaysiino gaalada
Dhibaatada ka dhalan karta salaada jimcaha iyo ta casar oo laga tago
mufti : Axmed Maxamud Axmed-yare dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
su, aal ku saabsan tawasulka oo macnihiisu yahay gaadhsiin
wa ayo ahlu sunah
soo jeediye : Maxamed Cabdi Umal dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
Muxaadaro ka cadaynaysa cida ay yihiin AHLU SUNUHU iyo calaamadaha lagu garto.
shiicada iyo mawaaqiftooda 3
soo jeediye : Maxamed Cumar Dirir dib u eegid : Maxamed Axmed Cilmi Saylici
muxaadarooyin taxane ah ka hadlaya shiicada iyo taariikhdooda madow ee ay kaga jiraan taariikhda islaamka, dhacdooyinka arintaas muujinaya, sida dilalkii ay u gaysteen muslimiinta iyo madaxdooda.
shiicada iyo mawaaqiftooda 2
muxaadarooyin taxane ah ka hadlaya shiicada iyo taariikhdooda iyo waxyaabaha ay aamin san yihiin, muxaadarada labaad waxa uu kaga hadlay mawqifka shiicadu ay ka aaminsan yihiin sunada nabiga scw. Iyo saxaabada nabiga scw.
shiicada iyo mawaaqiftooda 1
muxaadarooyin taxane ah ka hadlaya shiicada iyo taariikhdooda iyo waxyaabaha ay aamin san yihiin, muxaadarada koowaad waxa uu kaga hadlay taaraakhda shiicada iyo waxa ay ka aaminsan yihiin qur aanka , meelaha ay iska eegyihiin yahuuda.
shiico ka digtoonaada
muxaadaro kooban oo ka hadlaysa shiicada iyo waxa ay ka aaminsan yihiin Aala baytka iyo saxaabada, iyo sida ay dariiqa uga leexsan yihiin.
boga : 11 - ka : 1